Nkwado Azụmaahịa Franchises maka ire | Ohere Franchise | Franchiseek
Chzọ Nkwado azụmahịa Franchises
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Chzọ Nkwado azụmahịa Franchises
Franchises Ntuziaka Azụmaahịa Pụtara
Mgbe ahịa dị mkpa, anyị na-ebunye! Mmemme franchise SME Skills Academy bụ usoro azụmahịa pụrụ iche, na-enye gị ihe niile ị…
Agụmakwụkwọ Esemokwu Eshia nke Asia - Setịpụrụ maka Mgbasa Zụlite ụwa Kpebie ỌR EM NWA ỌR FR NA-EGO NA AFA N'ime Afọ ole na ole gara aga…
Franchises Ndụmọdụ Ọhụụ
Franlọ Akwụkwọ Ederede aha Asụsụ French Asia
Asambodo Ederede Eshiki nke Asia - Setịpụrụ maka Mgbasa Zụlite ụwa KWES YOURR YOUR AH EMR YOUR AH O AH FR AH FR Gị NA AFA N'ime Afọ ole na ole gara aga…
DNS Accountants Franchise Mee ọdịnihu gị na DNS Accountants Franchise na azụmahịa nke gị site na ohere anyị gosipụtara. Na ...
Elọ akwụkwọ SME Skills Academy
N'ime afọ ole na ole gara aga, enwere ịrị elu maka ndị azụmaahịa iji nweta nkwado ha chọrọ. Ọ bụ ya mere azụmaahịa ahịa mba ụwa ji na-eto n'ike n'ike n'ọtụtụ afọ. N'ihi na ha bụ nnukwu ihe achọrọ maka ọrụ dịka ndị na-ahụ maka azụmahịa na ndị ọzọ.
Kedu ụdị njikwa azụmahịa Franchises dị?
Anyị na-enye ụdị franchises dị iche iche metụtara azụmahịa maka ire na Franchiseek. Yabụ ọ bụrụ na ị na-eche na ohere ndụmọdụ ndụmọdụ dị ugbu a bụ ị jụọ ajụjụ ị hiere ụzọ. Maka ugbu a, ndị azụmaahịa na-eji ọtụtụ ndị ọzọ enyere azụmahịa ha aka ime nke ọma ma nweta ụlọ ọrụ ha ebe ha kwesịrị ịdị na-enweta ego na ndụmọdụ dị mma. Ugbu a, anyị ga-edepụta ohere ole ị ga-ahụ ebe a na Franchiseek:
Ohere Ndị Isi Azụmaahịa: A na-ahụkarị mkpọmkpọrọ Consultancy na ngalaba franchising kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a ebe enwere nnukwu ndị ahịa maka ọrụ dị ka mba ndị a.
Ohere dị na mbelata ego: Ọrụ iwelata ego enyerela ahịa aka maka ọtụtụ afọ ugbu a. Site na iwepu ego ndi n’enweghi ego achoro ma obu itinye ego n’ime oru aka ndi a n’e enyere ndi ulo ahia aka kwa ubochi ka ha ghara imebi ego na nkea.
Ihe kpatara Ngalaba Na-ahụ Maka Azụmaahịa Na-agbanwe
Ugbu a, m ga - edepụta ụfọdụ ọnụ ọgụgụ anakọtara na afọ ndị gara aga gburugburu ihe kpatara oke ji achọ ọrụ maka ndụmọdụ ndụmọdụ n'etiti azụmahịa. Statisticsfọdụ n'ime ọnụ ọgụgụ ndị a na ihe ndị mere eme nwere ike iju gị anya ma ọ ga - eme n'ezie ka ị mata mmadụ ole na - eme azụmahịa nke ha na ụwa nke ugbu a.
1 mmadụ 10 n'ime UK na-eme azụmahịa nke ha.
N’afọ 2017, ebu n’amụma na 2018 ọzọ, nde mmadụ nde 3.2 nọ na UK ga-ehiwe azụmahịa nke ha.
Enwere naanị ihe karịrị nde mmadụ 25 na US na-azụ ahịa nke ha.
N’afọ 2015, US kụrụ ihe ndekọ, mebie nde mmadụ 27 na-azụ ahịa.
Obere ulo oru na US na-enye aka 64% nke ohere USA.
Pasent 55 nke ndị mmadụ na - azụ ahịa nke ha na US ga - abụ onye isi nke ha, anakọtara na nyocha emere n'oge na - adịbeghị anya.
Nchịkọta 50% nke obere azụmahịa malitere na US na-ada n'ime ọnwa 12 mbụ.
Achọpụtawo ya bụ isi ihe kpatara azụmaahịa na-ada na afọ mbụ site na ndụmọdụ na-adịghị mma.
Kedu ihe omume a na-egosi maka ngalaba ndụmọdụ azụmahịa?
N'ozuzu ya, ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi nnukwu ahịa maka ndụmọdụ ndụmọdụ azụmahịa maka obere azụmaahịa. Ọ na - egosikwa mmadụ ole na - ewu ụlọ ọrụ nke ha ụbọchị ndị a site na ala. Ihe kachasị dị ọnụ ọgụgụ m ga - ekwu site na nyocha a banyere US bụ na 50% nke azụmaahịa yiri ka ọ ga-ada site na ndụmọdụ ma ọ bụ nkwado na-adịghị mma. Nke a na-egosi etu ọrụ ndụmọdụ ndụmọdụ dị mkpa maka obere azụmaahịa si eme ka azụmahịa na-aga n’ihu.
Banyere Agency Express Agency Agency Franchise bụ mba UK kachasị na naanị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ala na ụlọ…
Gịnị bụ Bartercard na ọrụ ndị ọ na-enye? Kemgbe mmalite nke Bartercard na 1991, ụlọ ọrụ azụtawo n'ime…
Shutter Franchise Ohere gbagote ọnụ ahịa, itinye ego dị ala na njiri mara onye nwere ezigbo ndị ahịa. Naanị Shutters Franchise na-enye ndị…
Gbanwee oha ahia di n’ime obodo gi… nwee nchebara echiche banyere ndi nwere ahia nke obodo you mara… ohere di na ha ha ha
Jikọọ Fantastic Services na-amalite n'ụlọ-mmezi azụmahịa na mpaghara nke ị họọrọ Fantastic Services bụ ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ,…
Ozi a siri ike enyerela ọtụtụ puku aka ịzụlite Pọtụfoliyo ihe onwunwe nke $ 1,000,000 nke ọma na £ 50,000 na ego nnabata nzuzo maka ndụ - ugbu a,…